Warsaxaafadeed Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya oo tacsi u diray Xil. Mowliid Macaan iyo sarkaal ka tirsanaa xafiiska – Radio Daljir
Warsaxaafadeed Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya oo tacsi u diray Xil. Mowliid Macaan iyo sarkaal ka tirsanaa xafiiska
Mogadishu, Apr 08 -Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta tacsi qaran u diray ugu horreyn shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladdii, qaraabadii iyo qoyskii ay ka geeriyoodeen xildhibaan Mowliid Macaani Maxamuud iyo Faysal Xaaji Cilmi oo labadaba ku geeriyooday Isbitaalada Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
?Geeridu waa xaq,Waxaana EEBBE uga baryeeynaa in janadii Fardowsa ka waraabiyo, Dhamaan ummadda Soomaaliyeddna Samir iyo Iimaan ka hasiiyo? Ayuu yiri Ra?iisul Wasaaraha.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa ku booqday Isbitaaladii la geeyay 6-dii April 2012, Waxaana 7-dii April loo qaaday Isbitaalada Magaalada Nairobi oo ay halkaasi ku geeriyoodeen aroornimadii saakay saacadu markey aheyd 05:30 subaxnimo.
Mowliid Macaani Maxamuud waxa uu ahaa rug caddaa Siyaasi Soomaaliyeed oo waqtigiisa inta badan u huray u adeeggidda Shacabka Soomaaliyeed, Wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii dhexe, Isagoo soo qabtay heer agaasime iyo heer wasiir, Wuxuu kaloo waqtigiisa u huray hormarinta Isboortiga Soomaaliya oo uu ahaan jiray Garsoore Caalami ah ee Kubadda Cagta, Isagoona si fiican loogu xusuusto horyaaladda Jeneral Daa?uud iyo Kuwa gobaladaba.
Faysan Xaaji Cilmi, Waxa uu ahaa isku xiraha arrimaha bulshadda ee Xafiiska ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya, Wuxuuna ra?iisul Wasaaruhu ku tilmaamay inuu ahaa nin la socda arrimaha bulshad, hal abuur leh, waxqabad leh, Isagoona aad u xasuust waxqabadii uu xafiiska u qabtay, Wuxuuna Ra?iisul Wasaaruhu sheegay in Marxuun Faysal oo ku soo wada koreen magaalada Dhuusomareeb ee gobalka Galgaduud.
Dhinaca kale, Ra?iisul Wasaaraha ayaa sheegay in bukaanada kale ee ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Tiyaatarka Qaranka loo qaadi doono dalka dibadiisa, si halkaasi loogu daweeyo haddii Isbitaalada dalka wax looga qaban waayo.
Ugu dambeyntii Ra?iisul Wasaaraha ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Shacabka Soomaaliyeed, Wuxuuna marxuumadaasi geeridooda ku tilmaamay mid ay dowladda ka xuntahay.